Midedaka i Siberia, sempotra i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Ho an'ireo manampahefana, tsy ahazoana tombony ny miady amin'ny firehetana.
Voadika ny 03 Septambra 2019 16:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, русский, ਪੰਜਾਬੀ, Română , Italiano, English
Mpamono afo miady amin'ny doro ala ao Siberia. Avy amin'ny lahatsary YouTube-n'ny fantsombaovao Euronews “Лесные пожары не тушат из-за экономии средств”
Fahamaizana goavana no mamely ny ala ao Siberia, indrindra any amin'ny faritr'ireo repoblikan'i Bouriatie [fr], sy Sakha [fr] ary manodidina an'i Irkoutsk sy Krasnoïarsk. Araka ny ambaran'ny Greenpeace, mihoatra ny efatra tapitrisa hektara no mirehitra, izany hoe mbola lehibe lavitra noho ny haben'i Belzika. Ireo ala borealy midadasika, matetika antsoina hoe “havokavoky ny ilabolantany avaratra” no tena tandindonin-doza.
Efa ho roa herinandro izao, mivoaka eny anaty tambajotra rosiàna ireo sarinà ala midedaka sy ireo sary azo amin'ny zanabolana mampiseho ny halehiben'ny fahamaizana, arahan'ireo tenifototra #сибирьгорит (“midedaka i Siberia”), #гориттайга (“midedaka ny taïga “), #потушитесибирь, (“Vonoy ny afo ao Siberia”) ary #мирспасисибирь (“Hamonjy an'i Siberia anie izao tontolo izao”)
Masiaka ireo fanehoankevitra noho ireo manampahefana ao an-toerana nitaredretra tsy nanao mialoha ny famonoana ny afo. Na dia tsy zava-baovao any Siberia aza izy ireny, ireo mpahay toetrandro dia nanambara fa niely tamin'ny fomba nivatravatra be ny tamin'ity taona ity noho ny fifangaroan'ny rivotra mahery sy ny lohataona mafàna loatra tsy toy ny mahazatra. Ny fitavozavozàna nandray andraikitra koa dia mety azo hazavaina amin'ny hoe satria faritra lavitra no niharan'ireo firehetana.
Ho an'i Alexander Uss [ru], governoran'ny faritra Krasnoïarsk, tsy dia fanao loatra ny miady amin'ireo firehetana any amin'ny faritra lavitra be. Nandritra ny antsafa iray tao amin'ny vovonan'ny tanora nokarakaraina tany amin'ny oniversite siberiàna iray tamin'ny 29 Jolay, nampian'i A. Uss hoe “misolo ho azy amin'ny fomba natoraly eo ny ala”, sy hoe ireo firehetana any an'ala dia “tranga voajanahary efa mahazatra” sy hoe ny fiadiana amin'izy ireny dia “tsy misy dikany ary  mety handoza / hankarary aza ny fanandramana hanao izany”.
Saingy ny vanja tsy mirehitra irery. Tato anatin'ny andro vitsivitsy farany, tafakatra teny ambonin'ireo tanàna siberiàna ireny setroka ireny; toa an'i Novossibirsk sy Tomsk, toerana izay nilazan'ireo mpiasan'ny fahasalamàna ny fisianà fitomboan'ny antso filàna fiara mpitatitra marary ho an'ireo tratry ny fiakaran'ny tosidrà noho ny fahalotoan'ny rivotra. Ireo mponina farany lavitra any andrefana noho i Tatarstan sy koa any atsimo lavitra noho i Kazakhstan dia nilaza ihany koa ny fisianà fahasarotana amin'ny fisefoana ; amin'ny Instagram, mizara sarinà setroka matevina any amin'ny faritra misy azy ry zareo. Ny hafa indray mizara sarintena ahitàna azy ireo mitondra sarontava manampy amin'ny fisefoana [ru], misy soratra hoe “Midedaka i Siberia”.
Na izany aza anefa, manana fototra araka ny lalàna ireo fanambarana nataon'i A. Uss. Araka ny nanamarihan'ilay [ros] gazety rosiana Vedomosti mpiseho isanandro azy, “faritra fanarahamaso” ireo faritra lavitra nitrangan'ny firehetana, fomba fiteny nampidirina tany amin'ny taona 2015. Noho ny fahalaviran'izy ireny miala amin'ireo faritra misy mponina sy ireo fotodrafitrasa saropady, tsy voatery hiady amin'ireo firehetana ala any amin'ireny faritra ireny ireo manampahefana any an-toerana, fomba iray ahafahan-dry zareo mitsitsy vola sy fitaovana. Grigory Kukshine, avy amin'ny Greenpeace, anefa nanipîka tao amin'ny [ru] Sibir.Realii fa lavitry ny afo ny kitay raha ireo faritra fanarahamaso no andrasana hisy mponina ary manakaiky ny 90% amin'ireo firehetana ala ao Rosia tamin'ny lohataona lasa dia tany amin'ireny faritra ireny no nipoirany. Ny Douma- mpanjakana, parlemanta rosiàna, dia maminavina ny hiverina handinika [ru] ireo “faritra fanarahamaso”.
Araka izany, manomboka mamaly ny fangatahan'ny vahoaka ireo manampahefana. Tamin'ny 29 Jolay, ny Rosleskhoz, masoivoho rosiàna momba ny ala, dia nilaza [ru] hoe efa nanomboka namono ny afo ireo sampana sy fiaramanidina an'ny tafika. Saingy tena kely ihany izany ary efa taraiky. Toy izay nitranga nandritra ireo tondradrano tany amin'ny faritra Irkoutsk, ao Siberia, efa ampifandraisin'ireo mpaneho hevitra sahady aminà olana midadasika kokoa momba ny maha-tomponandraikitra sy ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fanjakana ilay valiny nasetrin'ny governemanta. Manampy trotraka an'io toedraharaha io ny tolotra fanampiana ho an'i Gresy avy amin'ny filoha rosiàna Vladimir Poutine mba hiadiana amin'ireo firehetana ala tamin'ny 24 Jolay [ru].
Zavadehibe ny manamarika fa betsaka amin'ireo faritra voadona no mijaly sahady amin'ny olana ara-ekolojika, izay midika fa ireo hetsika ekolojika efa misy (toy ny hetsika “Lanitra madio” ao Krasnoïarsk hanoherana ny fahalotoan'ny rivotra) dia nitàna anjara toerana lehibe tamin'ny fanetsehana ireo mponina mba hahatonga ny feon-dry zareo hisy mpihaino.
Araka izany ny hevitra hoe “tsy ahitàna tombony ara-toekarena” ny ady atao amin'ireo firehetana ala dia manakoako any amin'ireo olona miahiahy ny fomba nijeren'ny governemanta ireo olan-dry zareo tany aloha. Raha ny marina, io fehezanteny io dia lasa fanadrohadroana iray [ru], ao anatin'ny fanahy iray tsy misy hafa amin'ny an'i Dmitri Medvedev : “Tsy misy ny vola, nefa mijoroa ary mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo”, hoy ny nambaran'ny praiminisitra rosiàna tamin'ireo mpiasa mpisotro ronono tao Krimea tamin'ny 2016.